झापामा दुई करोडको लगानीमा ‘ड्रागन फ्रुट’को खेती – Loktantra Post Loktantra Post
Published On : 28 November, 2019 12:08 pm
On : banner, खबर, खेतीपाती
भद्रपुर । (रासस) ः कृषि उद्यममा लगानी बढाउँदै गएको काठमार्डौको गोल्यान एग्रो प्रालिले झापामा पहिलोपल्ट ‘ड्रागन फ्रुट’को खेती सुरु गरेको छ । सिउडी प्रजातिको यो फल अति गुलियो, स्वादिलो र महँगो हुन्छ ।
झापा गाउँपालिका–७ को मदरगाछमा अढाई विघा जमिनमा यसैवर्षदेखि सुरु गरिएको ‘ड्रागन फ्रुट’खेतीमा ६ हजार विरुवा हुर्किरहेका छन् । दुई वर्षमा फल्ने यो फलको लहरामा लगातार २५ वर्षसम्म फल लागिरहन्छ ।
वर्षौदेखि कपडा, धागो लगायतका उद्योग सञ्चालनमा प्रख्यात गोल्यान घरानाले झापामा नयाँ प्रकारको कृषि उद्यममा लगानी बढाएको छ । गोल्यान एग्रो प्रालिले मदरगाछमा ‘ड्रागन फ्रुट’ मात्र नभएर स्ट्रावरी, मेवा र कागतीको व्यावसायिक खेती गरिरहेको छ ।
‘ड्रागन फ्रुट’ उष्ण मनसुनी हावापानी भएको माटोमा फस्टाउने भएको हुँदा झापाको माटो यसका लागि उर्वर रहेको प्रालिका व्यवस्थापक नविन खनाल बताउनुहुन्छ । आगामी वर्ष मात्र फल दिने ‘ड्रागन फ्रुट’का लहरा हुर्काउन विशेष मिहेनत चाहिने उहाँ बताउनुहुन्छ । हाल खेती रहेको स्थानमा १५ सय वटा आठ फिटभन्दा अग्ला सिमेन्टका पोल लहरै गाडिएका छन् । एउटा सिमेन्टको पोलमा चार वटा लहरा हुर्किरहेका छन् ।
गोल्यान समूहले ‘ड्रागन फ्रुट’ खेतीमा रु.२ करोड लगानी गरिसकेको र अर्को वर्ष खेती विस्तार गरेर तेब्बर पार्ने योजना रहेको व्यवस्थापक खनालले बताउनुभयो । हाल दाङ र काभ्रेमा पनि ‘ड्रागन फ्रुट’को खेती भइरहेको छ । खेतीमा १५ जना स्थानीय कामदारले रातोदिन रोजगारी पाइरहेका छन् ।
नेपालमा यो फल वि.सं. २०५७ सालमा पशु चिकित्सक डा. जगन्नाथ राईले अमेरिकी इन्जिनियर साथीमार्फत भियतनामबाट नेपाल भित्र्याउनु भएको इतिहास छ । तर व्यावसायिक खेती भने भर्खरै मात्र सुरु गरिएको छ । गोल्यानको खेतीमा व्यवस्थापकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका व्यवस्थापक खनालले भारतको बनारसस्थित हिन्दु यूनिभर्सिटीबाट कृषिमै स्नातकोत्तर गर्नुभएको हो ।
खनालका अनुसार सिउडी हुर्किने गर्मी ठाँउमा यो फलको खेती हुन्छ । यसमा मानिसको स्वास्थ्यका लागि लाभदायक १२ प्रकारका खनिज, पोषण र भिटामिन तत्वको मिश्रण पाइने भएकाले विश्वभर नै यसले महँगो मूल्य पाउने गरेको छ ।
एउटा सिमेन्टको पोलमा लहरिएका बोटहरुबाट बर्षेनी २० केजीदेखि ३० केजीसम्म फल उत्पादन गर्न सकिने र यसको बजार मूल्य रु.आठ सयदेखि रु. एक हजारसम्म हुने बताइएको छ । यो फलबाट उच्चस्तरको आइसक्रिम र इनर्जी ड्रिङ्क बनाउन सकिन्छ ।